जान्नुहोस् ‘M’ बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् ! – ताजा समाचार
जान्नुहोस् ‘M’ बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता हुन्छन् !
मानिस आफ्नो नाम सधै प्यारो मान्‍ने गरिन्छ।उनीहरु आफ्नो नामको अक्षरलाई समेत बढी बढावा दिने गरेका छन्। प्राचीन कालमा पनि मानिसले नामकैको कारणबाट चुनौतीपूर्ण कार्य गर्दै आएको छ।
अंग्रेजीको १३ औ लेटर ‘यम ’ । किताबी ज्ञान बाहेक व्यवहारिक ज्ञानमा पनि ‘के ’ लेटरको महत्व रहेको बताइन्छ ।
‘यम ’ बाट नाम सूरु हुने मानिसहरुसुखी, भोगी, सत्यबादी, पितृभक्त, बिद्धान, अल्पशक्ति, योजनामा सफल, धनी उद्यमी, महिला सौन्दर्यमा रहने, धार्मिक, अभिमानी, शान्त, साहसी, अरुको डाहा गर्ने,झगडालु, गम्भीर तर क्रोधी स्वभावका व्यक्ति हुन्छन्।
‘यम ’ लेटरबाट नाम सुरु हुने व्यक्तिहरु दयालु, पराक्रमी, ब्यबसायी स्वभाव, लजालु, कलापारखी, अभ्यासी, महेनती, दक्ष, रिसाहा, स्त्री प्रेमी हुन्छन्।
जान्नुहोस् ‘एस’ S बाट नाम सूरु भएका मानिसहरु कस्ता स्वभावका हुन्छन् ? आउनुहोस् हेरौ ‘एस’ बाट सुरु हुने व्यक्तिको गुणहरु यस्ता छन्
अन्तिम पटक अपडेट गरिएको : November 28th, 2019,